Fijerena ny Hops-News-NingBo COFF Machines Co., ltd
Fijerena ny fiandrasana
Fotoana: 2020-10-20 Comment: 34
Ireo akora efatra lehibe ao anaty labiera dia ny malt, rano, masirasira ary hop. Ary na dia maro aza ny olona mientanentana amin'ny labiera hoppy, maro no mety tsy hahatakatra ny tena atao hoe hop.
Hops dia ny voninkazo, na ny kônitra, ny zavamaniry antsoina hoe HMLS LPLS. Ny fiompiana dia manampy amin'ny fitazonana labiera vaovao, lava kokoa; Ampio ny labiera hitazona ny lohan'ny volony - singa lehibe iray amin'ny fofon'ny labiera sy ny tsirony; ary, mazava ho azy, ampio hanitra, tsiro ary mangidy "hoppy".
Ny fiandrasana dia an'ny fianakaviana Cannabinaceae, izay misy koa ny rongony (hemp sy marijuana). Ny hops dia zava-maniry mafy ary lehibe eran'izao tontolo izao.
Ny labiera tokana eny an-tsena ankehitriny dia misy hops. Raha tsy nanao izany izy ireo dia ho "gruit" izay labiera amin'ny ankapobeny, fa tsy hops, dia mampiasa zavamaniry mpamosavy mpamosavy toy ny myrtle, yarrow, heather, na juniper.
Sidenote: ny mangidy dia azo avy amin'ny voankazo, anana ary koa legioma nampiana labiera. Ohatra: pith avy amin'ny volomboasary volom-boasary, toro-hevitra spruce, juniper, ary maro hafa.
Ny hops dia mizara ho karazany roa tena lehibe: mangidy sy hanitra. Ny hops mangidy dia hanana asidra alfa avo kokoa, hahatonga azy ireo ho ara-toekarena kokoa amin'ny labiera mangidy (kely lavitra no mandeha lavitra). Arom hops dia hanana menaka esansiela betsaka kokoa. Ireo menaka tena ilaina miovaova be izay manome ny ankamaroan'ny zavatra takatry ny olona amin'ny hoe "hoppiness." Miresaka fofona manitra toa ny citrus, kesika, manga, résina, melon ary ny maro hafa izahay. Amin'ny alàlan'ny fampidirana hops mialoha ny fizotran'ny labiera, ireo menaka manitra rehetra ireo dia mihena (mandraraka), na mandritra ny vay na mandritra ny fanamasinana. Izany no mahatonga ny fampidirana azy ireo any aoriana any amin'ny fizotran'ny fanaovana labiera ka mazàna manao fofona labiera “hoppier”. Ary koa, io tsy fetezana io dia ilay antony iray ihany izay tsy hijoroana ara-potoana ihany koa ny fofona sy ny tsiron'ny labiera be dia be. Ny ankamaroan'ny fofona manitra sy ny tsiro ho avy dia hiparitaka, ary mamela labiera hafa noho ny fikasan'ny mpamaky labiera.
Raha mila fanontaniana bebe kokoa dia mifandraisa jessie@nbcoff.com na whatsApp: 0086-13940040515
Previous: Ahoana ny fampiroboroboana labiera fanaovana asa-tanana
Next: Ahoana ny fisafidianana kojakoja labiera asa-tanana